यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा गोरखा सैनिकलाई साढे दुई वर्ष कैद
सोमबार ७-३-२०७७/Monday 10-19-2020/	09:37 pm
२ भदौ, २०७७
लण्डन । बेलायती गोरखा सेनामा कार्यरत एक गोरखा सैनिकलाई आफ्नो साथीको छोरीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा अदालतले साढे दुई वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ ।
बेलायतको स्वीइन्डेन एडभर्टाइज नामक पत्रिकाले ४४ वर्षीय विनोद राईलाई ब्रिस्टोल क्राउन कोटले सजाय सुनाएको उल्लेख गरेको छ । राईले आफ्नो साथीको छोरीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपलाई अदालतसमक्ष स्वीकारेका भने थिएनन् । गत वर्षको १९ जुलाइमा आफ्ना बच्चाहरू स्थानीय रेल स्टेशनबाट घर ल्याउने क्रममा उनीहरूसँगै १३ वर्षभन्दा सानो उमेर मात्र उल्लेख गरिएकी ती बालिकालाई पनि साथमा ल्याएका थिए ।
आफ्ना बच्चाहरू घरमा ल्याएर छाडेपछि राई आफ्नो सिटबाट उठेर कहिलेकाहीँ मात्र खोलिने गाडीको ढोका खोलेर बालिकालाई गाडीको सिटमा ढल्केर बस्न भनी उनको वक्षस्थल छोएको उल्लेख छ । बालिकाका अभिभावकले राईसँगै आफ्नो बच्चालाई घरमा ल्याइदिन अनुमतिसमेत नदिएका बताएका छन् ।
घटना योजनाबद्ध नभए पनि राईले गरेको काममा खराब नियत देखिएको न्यायाधीशले उल्लेख गरेका छन् । राईको यस घटनाअघि चरित्रमा राम्रो रहेको र देशका लागि काम गरे पनि अब यसले गर्दा उनले आफ्नो पद र बस्दै आएको घर गुमेको छ ।
मंगलबार २ भदौ, २०७७ ०९:२९:०० मा प्रकाशित
‘कुमकुम भाग्य’ की कलाकार जरिना रोशनको निधन
‘मिस नेपाल एसईई २०२०’को ताज रेजिना लिम्बूलाई
नाइजेरियाली आन्दोलनमा कम्तीमा १५ व्यक्तिको मृत्यु
गण्डकी प्रदेशमा थप ३२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण
कोरोना संक्रमणबाट इरानमा फेरी एकैदिनमा अहिलेसम्मकै धेरैको मृत्यु
कार्तिक १६ गतेदेखि हुने भनिएको लोक सेवा आयोगको सबै परीक्षा स्थगित
दशैँभत्ता फिर्ता गर्न आफ्ना सांसदलाई कांग्रेसको निर्देशन
काँग्रेसको जुलुसमाथि प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास
चिकित्सकमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालको आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द
६ वर्षीय छोरीको प्रश्न : 'मामु बलात्कार भनेको के हो ?'
सर्लाही घटनाका पीडितलाई न्याय दिन डा. कोइरालाको माग
सार्वजनिक सवारीः बढी भाडा लिन नपाउने, सिटभरी यात्रु चढाउन पाउने
अर्को वर्ष विद्युत् महशुल अझ घटाउँछौँ – ऊर्जामन्त्री पुन